အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ၂၀၂၁ ခုနှစ် FIBAအာရှဖလား အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် – ခေါန်ရိန်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ၂၀၂၁ ခုနှစ် FIBA အာရှဖလား (2021 FIBA Asia Cup) အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည်ဟု အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ဖီဖာ အာရှဒေသဆိုင်ရာရုံးအရ သိရသည်။
တိုက်ကြီးအလိုက် လက်ရည်စစ်ပွဲ နောက်ဆုံးအကျော့ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၁၆ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး အာရှနှင့် သမုဒ္ဒရာပိုင်းဇုံဒေသမှ အကောင်းဆုံးအသင်း ၁၆ သင်း ပါဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်။FIBAအာရှ ဥက္ကဋ္ဌ Sheikh Saud Ali Al Thani က “ဒါကတော့ အင်ဒိုနီးရှား ဘတ်စကတ်ဘောအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့ နှစ် ၂ နှစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်မှာပါ။ FIBA အာရှဖလားကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပတာနဲ့ ၂၀၂၃ FINA ဘတ်စကတ်ဘော ပူးတွဲအိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပတာတွေက နိုင်ငံရဲ့ ဘတ်စကတ်ဘော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရှေ့ဆက်ဖို့ ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပါပဲ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
BEIJING, Dec. 23 (Xinhua) — Indonesia has been confirmed as the host of the 2021 FIBA Asia Cup, according to FIBA’s Asia regional office.
The final round of the continental showpiece competition will be held from August 16 to 28, 2021 and will feature the best 16 teams from Asia and Oceania.
FIBA Asia President Sheikh Saud Ali Al Thani said: “It will be an exciting couple of years for Indonesian basketball. Hosting the 2021 FIBA Asia Cup and co-hosting the 2023 FIBA Basketball World Cup isamassive step forward towards developing basketball in the country.” Enditem
Tom Wright(L) of Australia competes duringamen’s qualifier group C match between Australia and South Korea at FIBA 3×3 Asia Cup 2019 in Changsha, capital of central China’s Hunan Province, May 24, 2019. (Xinhua/Chen Zeguo)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကရာချိမြို့တွင် ဘွိုင်လာအိုးပေါက်ကွဲ၍ လူ ၈ ဦး သေဆုံး၊ ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့ဂျာဗားပြည်နယ်တွင် ကနူးလှေနစ်မြုပ်မှုကြောင့် လူ ၁၈ ဦးထက်မနည်း ပျောက်ဆုံးနေ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မာကူလူပြည်နယ်အနီးပင်လယ်ပြင်တွင် ပြင်းအား ၆.၁ အဆင့် ငလျင်လှုပ်ခတ်